Qalabka wax lagu tolo
S taxane helical Gooryaanka gear motor tolida nooca. Gearrada dhimista dixirigu waxay u kala baxaan laba taxane, oo ah noocyada XA oo leh shaft iyo XF-XC oo leh qalab kor loogu qaadayo matoorka.
Matoorka gear gear gear gear wuxuu qaataa habka isku xirka tooska ah ee matoorka, qaabdhismeedkuna waa marsha kowaad ee helical iyo gudbinta marsha koowaad ee gooryaanka. Wax soo saarku waxa uu ku xidhan yahay usheeda dhexe waxana uu ku yimaadaa lix qaab oo wax lagu dhejiyo. Waa la rogi karaa oo la rogi karaa. Qalabka helicalku wuxuu qaataa dusha ilig adag, hawlgal deggan, awood qaadis weyn, heerkulka deegaanka shaqada -10 °C ~ 40 °C. Alaabtani waxay leedahay sifooyin kala duwan oo kala duwan oo xawaaraha, qaab-dhismeedka is haysta iyo rakibaadda habboon marka la barbar dhigo alaabta la mid ah.
Matoorrada gear-ka ee khadka iyo bevel helical, mishiinnada xawaaraha marshashka barbar socda, iyo sanduuqyada qalabka gooryaanka ee leh mishiinka AC. Kala duwanaanta waxaa lagu dhisay aluminium ama birta, waxayna dabooshaa qulqulka, oo leh nooca cusub ee Helical worm-geared motor, cabbirka gawaarida ayaa laga yaabaa in lagu sameeyo n2 = 22.8 rpm 1 hp, 230/400V 50Hz wax soo saarka 5 heerka hufnaanta IE2, Tilmaamaha hawlgalka, fadlan nala soo xiriir.
S series helical gear gear gear motor (saamiga xawaarihiisa weyn),
1. S taxane ah oo yareeya waxay leedahay farsamooyin sare oo farsamo ah, waxayna leedahay isku-dar ah qalabka helical iyo gooryaanka si loo hagaajiyo qulqulka iyo waxtarka mashiinka. Taxanaha alaabooyinka ayaa leh tilmaamo dhammaystiran, kala duwanaansho xawli ah oo ballaaran, isugeyn wanaagsan, la qabsanaya hababka rakibaadda ee kala duwan, waxqabadka, badbaadada iyo kalsoonida, nolosha adeegga dheer, iyo hirgelinta heerarka caalamiga ah.
2. Dusha sare ee jidhku waxa ay leedahay kulayl aan fiicneyn oo qallafsan, nuugista gariirka xooggan, heerkulka hoose ee kor u kaca iyo qaylada hoose.
3. Mashiinku wuxuu leeyahay waxqabadka tolidda iyo is-waafajin xoog leh goobta shaqada.
4. S series helical gear gear gear gear wuxuu leeyahay saxnaanta gudbinta sare, gaar ahaan ku haboon waqtiyada la bilaabo soo noqnoqda. Waxaa lagu xidhi karaa kala duwanaanshiyaha xawaaraha iyo qalabaynta noocyada kala duwan ee wadista baabuurta. Waxaa lagu rakibi karaa in hawlgalka gudbinta 90 degree.
5, S helical gear reducer 20CrMnTi wax, iyo ka dib markii carburizing iyo deminta daaweynta kulaylka, engegnaanta dusha gaari kartaa 58-62HRC, processing ilig shiidi, saxda ah waxay noqon kartaa cawl 5-6, oo leh saxan processing sare, gudbinta xasilloon, mugga yar. sifooyin leh sida awood sare iyo cimri dheer.
6. Matoorka gawaarida helicalka ah waxaa lagu qalabeyn karaa noocyo kala duwan oo matoor ah si loo sameeyo isdhexgalka korantada, kaas oo si buuxda u dammaanad qaadaya sifooyinka tayada alaabta.
1. Isku-darka qalabka helical iyo gooryaanka ayaa leh qaab-dhismeed isku dhafan iyo saamiga dhimista ballaaran.
4. Waxtarka celceliska: saamiga dhimista waa 77% ee 7.5-69.39; 62% loogu talagalay 70.43-288; iyo 57% isku darka S/R.
Qiyaasta xawaaraha: nooca aasaasiga ah 9.96 ~ 244.74, S taxane / R nooca isku dhafka ah wuxuu gaari karaa 8608
Xawaaraha qulqulka: 43 ~ 4200 Nm
Qiyaasta awoodda: 0.18 ~ 22 kW
S-shaft fidinta wadajirka ah nooca fidinta SF-shaft, rakibida flange
S...S- waxay tilmaamaysaa dhidibka dhidibka SA-dhidibka ku xidhan yahay
SAF-usha ku rakiban, flange ku rakiban tahay SAT-shaft oo leh cudud torsion ah
Taxanaha yareeyayaasha waxay la mid yihiin qaab-dhisayaasha K-Taxanaha waxaana loo isticmaali karaa si isku beddelasho ah. Si kastaba ha ahaatee, isla awoodda iyo lambarka jirku hoos yimaaddo, taxanaha S wuxuu gaari karaa hoos u dhac weyn oo saamiga.
Moodooyinka ugu muhiimsan ee S series helical gear-worm gear gear yareeya waa:
Markaad isticmaasho fikradayada qaabaysan oo aad isku gayso cutubyada qalabka gooryaanka helical ee taxanaha S iyo matoor AC si aad u noqoto matoor-xirxir-xirxir, ama servomotor. Si la mid ah moorsada kale ee Shiinaha S Series Helical Gear motor, Xawaaraha Gear Motor, laakiin waxaad ka heli doontaa faahfaahin badan oo ku saabsan China Worm gear motor manufacturer, noocii hore ee gear-ka iyo alaabada matoorka ee lagu rakibay macaamiisheena sida warshad sibidhka , Warshad biyaha lagu daweeyo, warshadda saliida iwm. iyo dhammaan Matoorka qalabka gooryaanka ee loo yaqaan 'helical-worm gear motor' waa qayb gaar ah oo buuq yar. Anaga Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa biraha, macdanta, qaadista, warshadaha iftiinka, kiimikaadka, gaadiidka, dhismaha iyo farsamooyinka kale ee yaraynta xawaaraha qalabka.
1. Warshadaha Kiimikada iyo ilaalinta deegaanka
3.Dhismaha iyo dhismaha
4.Beeraha iyo cuntada
5.Maro iyo maqaar
6.Dur iyo warqad
7.Mashiinnada baabuurta lagu dhaqo
Taxanaha Taiwan S HELICAL WORM gear motores, waa tayo sarreeya laakiin aad ayuu uga qaalisan yahay kuweenna oo halkan waxaad ka heli kartaa Faahfaahin ku saabsan taxanaha S ee HELICAL WORM gear matoorka waa isku mid laakiin qiimaha ugu tartanka badan. Anaga, wax soo saarka Sogears ee sumcadda leh waxay bilaabantay sanadka 1993 - Iibiyaha, Ganacsadaha iyo Dhoofinta tayada sare leh ee Helical Worm gearbo. Sida soo saaraha mootada, Sogears sidoo kale waxay soo saartaa matoorada qalabka helical ee taxanaha K/F/R kaas oo loo qaabeeyey si la mid ah noocyada SEW'. Waxaan bixinaa dhammaan SEW Eurodrive heerka Helical Gear Motors, MOVITRAC, Helical Bevel Gear Motors, Helical Worm Gear Motors, Parallel Shaft Helical Gearmotors. Warshadayadu waxay kaloo bixisaa adeeg la habeeyey iyo adeeg jumlo ah. Dareen xor u ah inaad iibsato qiimo dhimis helical worm gear motores S series oo lagu sameeyay Shiinaha oo kaydka ah halkan warshadeena.
Quful bir / Ductile iron
40CrMo aluminium bir ah
Heerkulka kac (MAX)
Shiinaha oo leh tayada tayada ugu sareysa, HRB/LYC/ZWZ/C&U. Ama magacyo kale oo la codsado, SKF, FAG, INA, NSK.
1.1. Waxaan bixinaa 15 bilood oo dammaanad ah. Waxaan khabiirkaaga u nahay marshada gooryaanka helical-hal- iyo marxalado badan. Waxaan nahay lammaanahaaga inta badan mashiinka caanka ah iyo shirkadda mashaariicda adduunka oo dhan. Ku qor flange mootada iyo isku xidhka mootada matoorada IEC ilaa usheeda dhexe oo kaliya.
1.2. Waxa aanu haynaa kumanaan matoorada gear-ka ah. Laga bilaabo Awood-gelinta 0.06KW illaa 200KW, Saamiga 1.3-289.74, Xawaaraha soo-saarka 0-1095rpm iyo wareegga soo-saarka 1.4-62800Nm. Waxay buuxin karaan dhammaan shuruudahaaga kala duwan ee warshadaha kala duwan. Dixiri dixirigu waa habayn qalab helecal ah kaas oo dirxigu ku meshado qalab dixiri ah. Qalabka gacanta midig ee helical ama gacanta midig waa mid ay ilkuhu ku qalloociyaan .
1.3. Waxaan soo bandhignaa buugga macluumaadka loo yaqaan 'E-katatalog' ama waraaqda waraaqaha ah, si aad u dooran karto masawirka si fudud iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
1.4.Ka soo dhawow inaad soo booqato warshaddeenna si aad u hubiso alaabadayada, waxaan kaa caawin karnaa inaad ballansato hudheelka ama tigidhada
2. Macluumaadka Xogta
Waxaan ku takhasusnay dhimista wadista gudbinta geerska in ka badan 20 sano! Kuwa ugu caansan 5 Shiinaha alaab-qeybiyeyaasha. China sogears Gear motor manufacturer, tayada sare ee dhimista matoorka iyo bixinta matoorada korontada, soo saaraha gawaarida qalabka. Awood Wax-soo-saar: in ka badan nus milyan oo qaybood oo ah matoorka qalabka xawaaraha sannadkii.
Shirkaddu waxay leedahay awood farsamo oo xooggan. Waxay leedahay in ka badan 400 oo shaqaale ah hadda, oo ay ku jiraan in ka badan 40 farsamayaqaannada injineernimada iyo 10 khabiiro iyo injineero sare oo ku raaxaysanaya gunnooyinka gaarka ah ee Golaha Gobolka. Waxaan soo saareynaa sanduuqyada Gear-ka ee Gooryaanka, Bevel Gearboxes, Helical Gear Box, sidoo kale waxaan nahay Siemens Qaybiyaha Idman, Alaab-qeybiyaha, Ka iibiya Shiinaha & Hindiya labadaba.
Gudubtay "Shahaadada Nidaamka Tayada Caalamiga ah ee ISO 9001", "Shahaadada Tayada Caalamiga ah ee AAA++", "Shahaadada Swiss SGS", Astaanta astaanta u ah warshadaha Electromechanical Shiinaha", "iyo wixii la mid ah.
S: Noocee matoorka gear-ka ah ayaad noo soo saari kartaa?
A: Badeecadaha ugu muhiimsan ee shirkadeena: JWB-X taxane makaanik isdabajoog ah oo isdaba joog ah gudbinta, RV series gear motor, B/JXJ cycloidal pin gear gear motor, NCJ taxane marsho motor, iyo R, FK, S taxane helical-Ilkaha gear motor (oo la mid ah SEW), in ka badan boqol nooc iyo kumanaan gaar ah.
S: Waa maxay codsiga matoorka gear-ka?
J: Alaabooyinka waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhoobada, dhalada, cuntada, metallurgy, biirka & cabitaanka, daabacaadda iyo dheehida, dharka, injineernimada petrochemical, saadka bakhaarka, mashiinka qoryaha ka shaqeeya, qalabka ilaalinta deegaanka, daabacaadda iyo baakadaha, farmasiga, iyo maqaarka. Alaabada waxaa lagu iibiyaa wadamada iyo gobolada qaarkood, sida Yurub, Ameerika, iyo Koonfur-bari Aasiya, waxayna leedahay daraasiin qeybiyeyaal ah iyo wakiilo adeega iibka kadib.
S: Waa maxay maadada aad isticmaasho?
A1: Jidhka Guriyeynta Aluminium ( ee taxanaha RV ee gooryaanka gear motor Size 30 ~ 90) Matoorada gooryaanka Helical gear matoorada waxay ku gaadhaan qulqulka sare ee xawaaraha hooseeya iyo qiimaha la awoodi karo. Waxay ku urursan yihiin qalabka helical iyo dirxiga. Helical gear motor header, waa qalab aad u macquul ah oo dixiri ah oo la qiimeeyo. Qalabka gooryaanka ee cabbirka SB025 – SB090 ayaa lagu sameeyay aluminium iyo SB110-SB150 oo ah birta shubka ah.
A2: Qalabka birta ah ee taxanaha RV, Cabbirka 110-150, ee NCJ & F/R/S/K taxane helical gear motor)
Sogears summada matoorada Helical Worm iyo matoorada servo-matoorada. Iyada oo xoogga la saarayo kala duwanaanshaha waxqabadka hoose, unugyo gear dixiri ah oo leh servo-motor-ku-dhafan, waxay noqotay xalka ugu wanaagsan ee loogu talagalay darawallada leh matoorrada xaglaha ah. Waxtarka ayaa si aad ah uga wanaagsan kan qalabka gooryaanka saafiga ah. Faahfaahin dheeraad ah waa sida soo socota: